MANAGEMENT & BUSINESS CARE, Myanmar, Mandalay, Chan Aye Thar Zan Township | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
MANAGEMENT & BUSINESS CARE
in ကှနျပြူတာနညျးစနဈ ရောငျးဝယျသူမြား
အခနျး အီး-၄၊ တတိယထပျ၊ ၃၄လမျး၊ (၇၈)လမျး ထောငျ့၊ စကိုငျးဝေါလျရှော့ပငျးမောလျး၊ အမျအိုငျစီတီပတျချ၊, ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ, မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး
09-781219038 , 09-976517238 ,
MBC was started byasmall group of people to develop ICT solutions in the country. We always care about employee development, motivation, and job satisfaction. We often provide plans and opportunities to make them motivated and creative. Initially, MBC developed its IT solutions with the DOS version. Then, developedadesktop version to upgrade better solutions. After that, the desktop version is upgraded intoaweb version when new technologies are applied in the market and now we developedacloud version. We are also setting upaplan to explore further advanced technological development.
ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန် မှန်၊ မမှန်ချက်ချင်းသိရှိနိူင်ခြင်း။
ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို Count (အရေအတွက်)မျိုးစုံသုံးနိုင်ခြင်း။
Company ခွဲများတိုးချဲ့သုံးနိုင်ခြင်း၊ Computer အလုံးအရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ချိတ်ဆက်သုံးနိုင်ခြင်း၊ စာရင်းများကို Myanmar/English တွဲပြီးထုတ်ယူနိုင်ခြင်း၊ အစမ်းရှင်းတမ်း၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများနှင့် အရှုံးအမြတ် စာရင်းများကိုအလွယ်တကူ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။
Intergated Accounting Information Mangement System.
POS System, Restaurant System, Petrol POS System.